Makhaayadaha lagu raaxeysto inta lagu jiro NAB Show | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Makhaayadaha lagu raaxeysto inta lagu jiro NAB Show
Makhaayadaha lagu raaxeysto inta lagu jiro NAB Show
Maaddaama aad run ahaantii tahay inaad ahaato 21 jir si aad xitaa u neefsato Las Vegas, waxaan u dooranay 21 ka mid ah meelaha ugu fiican (qaarkoodna yihiin “goobo maxalli ah”), oo aan u qurxin NAB Show kaqaybgalayaasha) si aad u hesho dhadhanka dhadhanka ugu fiican! Kuu fakaraa, maahan in qof walbaa doonayo inuu meela walba jeclaado, laakiin waxaan ka helay khibrad qancisa midkasta iyo midkasta! Waxa kaliya oo aan dhihi karo waa - wadada 2020 NAB Show, Jooji oo dhadhamis ismariska! Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah xulashooyin dhadhan fiican oo hubaal ah inay kaa farxin doonaan:
TAO Restaurant (3377 S Las Vegas Blvd, #702-388-8338) Booqo website
Sanad walba inta lagu gudajiro NAB Show, Waxaan u tuuraa dhacdo yar oo loogu talagalay asxaabta dhaw, qoyska iyo shaqaalaheenna makhaayadda TAO. Sannadkii la soo dhaafay, waxaan go’aansaday inaan u oggolaado server-yadu inay cashada oo dhan gacmahooda ku qaataan. Waxaan ku dhamaynay madadaalo waali ah shanta koorso oo leh dhammaan noocyada cuntooyinka kaladuwan. Waa maxay qarax! Miyaan ku talin karaa Malaga Caanooleyda ee Glamzed Salmon? Isku darka Shiitake Mushrooms & Lotus Root ayaa iyadana aniga igu sameeyay! Tani 60,000-foot-laba jibbaaran, oo ah sheeko fara badan “Aasiya City” ayaa leh maqaayad, tas-hiilaad diyaafad ah, makhaayad, iyo goob lagu caweeyo oo aad u qabow. - Vegas waa MUST-SEE !!!
Hooska of Siam (953 E. Sahara Ave. STE. A5 #702-735-3033) Booqo website
Anigu waxaan ka Mid jeer halkan BADAN saaxiibada our ka Facilis Technology. Ay Northern Thai Karin waa dilaaga! duck buni ... kaluun qoto-shiilay ... menu oo buuxa waxaad yaabin doona oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale hubaal ka dhigi doonaa doorashada hawl ku dhowaad aan macquul! Waxaa yimaado sida makhaayad hooyo-iyo-pop a - laakiin mar walba waa qarax oo aad u fariisan kartaa dad badan oo miiska la mid ah. Oo oh - waxay leeyihiin khamri! Dhammaan oo ka mid ah isu-gaynta kala duwan ee cuntooyinka iyo khamri raagay oo isu sharaxo sababta aan halkan inta badan - isagoo aan cunay isla Combo saxda ah laba jeer!
Carbone Talyaani Makhaayad (3730 S Las Vegas Blvd. #877-230-2742) Booqo website
Waxay ku taal gudaha Hoteelka Aria & Kaashka, Carbone Italian Restaurant waxay u adeegtaa cunno talyaani ah oo Talyaani ah oo sifiican loo diyaariyey. Baarka buuxa wuxuu dhameystirayaa cunnada waqtiga aan waqtiga laheyn iyo shaqaalaha sugitaanka ee cajiibka ah ayaa soo koobaya khibrada. Hantida ayaa si fiican u dooratay markii ay go’aansatay inay ku darto mid aan sharrax lahayn oo raaxo leh, oo wali qurxoon, makhaayad. Lobster Fra Diavolo wuxuu ahaa tusaale, laakiin waxaan filayaa inaan ka yarayn.
Chengdu dhadhamiya (3950 Schiff Dr. #702-437-7888) Booqo website
Dhadhamiya Chengdu bixisaa cunnada Sichuan. dhadhan xaq u muuqataa in ay ku boodbooda baxay oo waxaad ku tidhaahdaa, i sii aan cunee! (No aha in hab). cuntada ugu fiican ee Chinese ayaan lahaa dibadda Shiinaha. Waxaan u lahaa digaag bang, bakayle la jarjaray Maraqa iyo qarsoodi ah walaasheed ka yar ee. Waxaan isku dayay Chi Mao, laakiin waxa ay ahayd waxoogaa basbaas ii. Dhadhan Geesi & shaqaalaha Friendly.
Mr. Chow (3570 S Las Vegas Blvd. #702-731-7888) Booqo website
Waxay ku taal gudaha Kaysar, Mr. Chow wuxuu kudhisan yahay habka karinta Shiinaha ee qaabka Shiinaha. Ches, xarrago leh oo cajiib ah, Mr. Chow wuxuu si fudud u iftiimiyaa qaabka. Qaab dhismeedka guurguura oo laga xayiray saqafka oo laydh la beddelayo oo la beddelayo iftiin midab khafiif ah ayaa bixiya ambi dheeraad ah. Adeeggu aad ayuu u fiicnaa; hudheelku wuxuu u muuqdaa mid u janjeersan inuu u adeego qoys ahaan ama kooxo waawayn, si kastaba ha ahaatee. Cunno-qabateyaal keligood taagan ayaa taagan. Saxanka saxeexa, duck Beijing, wuxuu ahaa mid la yaab leh. Iyagu gacanta ayey ku jiidaan noododkooda gaarka ah, sidoo kale! Waa goob lagu raaxeysto oo la cunteeyo - la imow saaxiibo qaarkood!
Soo celinta Baasteedka Bar (5288 Spring Mountain Rd. #702-750-9898) Booqo website
Soo celinta Baasteedka Bar waa Restaurant furan iyo Waasacnimo Vietnamese. Waxay qaadataan ku saxan dhaqanka Bahn Bao (kubad qaabeeya caadka bolle hilib, basasha, ukunta, likaha, iyo noocyo kala duwan oo khudaar) waa "Banh Bao Bo Xao" kiiskan hilibkii iyo khudaar gudaha waa Crooked-Eye iyo walaaq-shiil. Waa entrée a delicious in kharash ka yar, anagana 8! Ay Maraq baasto dheer ah (Fo) ahayd arrin dhadhan fiican iyo sidoo bixiyey brisket, garabka, garabka dufanka leh, tripe, seed ama steak dhif ah sida doorashooyin hilibka. ilaa aan ka shaqeeyey dareemaha in ay isku dayaan in ay Soda Sua Hot Ga (Vietnamese Egg Soda) iyo palette adventurous, laakiin qireen galbeedka waxaa abaal marin caynka strangely u cusboonaysiinta ee shiidan baraf / sharaabka custardy. Waxay leeyihiin menu dheer qaar ka mid ah fursadaha iyo khudrada, iyo sidoo kale doorashada ka mid ah qaar ka mid ah cabitaanka khamriga wanaagsan.
Yui Edomae (3460 Arville St. #702-202-2408) Booqo website
Aan ugu fudud si aad u hesho, Yui Edomae waa makhaayad sushi cusub ka Faydatay Dhudhumadeeda iska off wadada ugu weyn. Waxaa qoreysa adeegga omotenashi (adeegga Japanese -. Ie, diirimaad, ixtiraam, iyo fiiro gaar ah u faahfaahsan) Sida dhammaan maqaayado sushi, waxay ku takhasusaan qayb ka mid ah shantii dhadhankii aasaasiga ah Umami (macaan). Waxaan u lahaa Ikura ah (oo aan inta badan ka heli xoogaa aad cusbada leh, laakiin waxay ahayd oo kaliya kaamil ah halkan), Aoyagi (clam Orange) kaas oo sidoo kale ahaa nin qumman - dhaylo ah oo macaan la qaniinyada midig oo keliya, iyo qaar ka mid ah Uni (badda Urchin) - waxaa iftiinka, macaan iyo briny a bit kaadida ahaa. Haddii aad u jeclahay jawiga, cunto cusub (oo la caasimada ah F), iyo dhadhan weyn, hubi this out!
Adhiga & haad (380 W Sahara Ave. # 626-616-6632) Booqo website
Iyo ido & haad adeegta Hainanese Chicken Rice midkood keligiis ama 3 noocyo kala duwan oo cunto digaag ku salaysan. Qiimaha yihiin on par leh maqaayado cunto si dhakhso ah. baalashooda Chicken (Thai karamell-Garlic), iyo fursado kale oo dhowr duubaan baxay menu. Dhadhan fiican, gaar ahaan qiimaha. Waxaan dareemayaa in ay taasi noqon doonaa sida ugu cuntada wadada-iibiya markii aan dabooli Broadcast: Asia ka dib sanadkan ...
FukuBurger (3439 S Jones Blvd. # 702-776-8928) Booqo website
Fukuburger qoreysa xoogna Japanized American - a "marooji Tokyo" on cunnada oo dhan-American. makhaayad waxay leedahay labadaba dukaamanka iyo gaari xamuul ah cunto ah in booqday dhacdooyinka kala duwan iyo goobaha ku xeeran Vegas. Waxaan siiyey Buqbuqada Asia laba suul ka dib ururinta laba xoogna ay. Caajisaan leh, xoogna? Just dar dhaqanka kale idinkaa iyo in doonaa dib-u-hindisi xiriirka aad la cunaa maalin kasta!
Soho SushiBurrito (2600 W Sahara Ave no.115 #702-778-2525) Booqo website
Soho SushiBurrito qoreysa qasayso ah flavorsome of laba dhaqan in la sii kordhaya ee Las Vegas, California, Colorado iyo Utah - cunnada ay Mexico iyo Japan. Its Mexico City kulmay Tokyo kulmay cuntada si dhakhso ah! Ma aha oo kaliya ma Kariyaha John Chien Lee keeno in ka badan labaatan sano oo waayo aragnimo ah, Kuliyadda in ay miiska, laakiin sidoo kale wuxuu keenaa dose ah oo kulul of masuuliyadda deegaanka. waayo-aragnimo lagu qadeeyo A taasi ammaan u ah caalamka oo u roon yahay in carrabka! Our Janet West waa inay ku dadaalaan this!
Hong Kong Café (3325 Las Vegas Blvd. S. #702-607-2220) Booqo website
The Café Hong Kong waxay bixisaa qasayso gaar ah East iyo West in this mid ka mid ah nooc ka mid ah Café ee Resort Hotel Palazzo dabaqa casino. Waxaan waraystay laba ka mid ah saxamada ay saxiixiisa - Macau-style caloosha hilibka doofaarka la dubay ah, iyo King Seafood Maraq baasto dheer ah Vietnamese. Waxaan ahay Gormeega lahayn, sidaa darteed waxaan ku odhan doonaa in cuntada ay ahayd 'aad u wanaagsan. " My kabalyeeri ahaa mid gaar ah, sidoo kale ... Aad u fiican.
Kame Omakase (7331 W Lake Mead Blvd. #702- 562-8668) Booqo website
Kame waa makhaayad Sushi in waa ballaarinta / kordhin Julius Karangi ayaa ka mid ah makhaayad Yummi la solay Sushi jira ah. Kuugga Eric Kim aad qaadataa ay weheliyaan on safar dhadhan Badda oo uu badda u gaar ah, cusub, oo la yaab leh dhadhan fiican leh. Waxaan quraacdeen dhowr asxaabtiisa ah la oo aan la waraystay suxuunta badan ... wax walba oo aan lahaa wuxuu ahaa mid yaab. version kasta oo Nigiri waxaan isku dayay ahaa mid gaar ah. Haddii dhanxanegga waa qayb ay ahayd deeqsinimadii badaha, si fudud waa in aad halkaan wax cunaan!
Chow (1020 Fremont St. #702-998-0574) Booqo website
At Chow, Karinta Southern kulmay cunnada Asian. Ma ahan Asian-isuga, in kastoo, laakiin wada-noolaanshaha isla'egta. Waxaa aad u aqbalayaan - iyadoo aan loo eegayn sida kala duwan ah ayaad tahay; meesha mashaariic ah 'in qof walba uu deriskaaga' sort of vibe. duhurkii Open ilaa sideed maalmood oo ugu. Waxay ku daray suuqa kala wuxuuk ay dhacdo in aad tahay degdeg ah a.
J sanada ee (3565 S Rainbow Blvd. #702-269-5446) Booqo website
J sanada ee Creole & Cajun karinta u dhawaadeen inay i lahaa Mu'minaadka ah waxaan lahaa bartey lagu qaado Louisiana. hubaal waxay u dhiibeen ay ballan u leh "Soul baaquli." The sanada iyo Jambalaya ahaayeen in ay u dhintaan. Waxaan soo koobay aan waayo-aragnimo la kafeega chicory iyo beignets macmacaan lamaane. halkan ka Cuna - dhab ahaantii!
Lo-Lo ee Chicken & vafler (2040 N Rainbow Blvd. # 702-483-4311) Booqo website
Lo-Lo ee Chicken & vafler qoreysa cuntada ugu fiican nafta Vegas leeyahay in ay bixiyaan. shaah macaan oo kala duwan oo Kool-Aid had iyo jeer waa on gacanta iyo "microwave" waxaa loo arkaa erayga wasakh ah halkan. maqaayadan waasac lagu yaqaan saftay celebrity celiyo by kooxaha Charles Barkley, Shaquille O'Neal iyo Muhammad Ali iyo qaar kale. Ay saxan saxiixa waa digaag ugu fiican iyo vafler aan abid ka dhadhamiyey malabkan. Ay digaag waa sidaas oo wanaagsan laga yaabaa in la jirrabay in aad ka leefleefi aad faraha, gacmaha iyo malaha suxullada haddii aad tahay qof aad u cuni jiray 'xamaasad leh ".
Rivea Las Vegas (3940 Las Vegas Blvd S. # 702-632-9500) Booqo website
Rivea Las Vegas isu keentaa dhadhankii ee France iyo Italy in makhaayad this qurux badan ugu sareysa Hotel Delano ee Mandalay Bay Casino in qoreysa pano a breathtaking view of ramic Las Vegas. taarikada yar yar yihiin oo ay soo jeedin 2 in 3 taarikada qofkiiba. Waxaan u socday in ay isku dayaan 3 taarikada kala duwan si loo helo dhadhankii ugu cusub ka booqashadayda laakiin carsaanyo Salad ahaa mid u wanaagsan waan soo dhamaaday isagoo taarikada 2 ah in halkii. Waxaan raacay in la zucotto ah (khamri, cake iyo jalaatada saxan) ee macmacaan. Wayn! Waxay leeyihiin liiska khamri gacansaydheen soo bandhigtay inta badan Faransiis, Talyaani raagay, iyo Mareykanka.
Herringbone Las Vegas (3730 Las Vegas Blvd S # 702-590-9898) Booqo website
Tilmaamo Herringbone badda The cajiib ah waa inaad cuntaan in ay aaminsan yihiin. makhaayad Tani waxaa uu ku dhiiraday by cunnada ay xeebta ah ee California - waa makhaayad Vegas labaad Brian Malarkey (a alum Top Kariyaha) 's, bedelida Lounge Gold ee Aria. cuntada badda ka daahirane ah isku daraa hilibka maxaliga ah illaha ka masuul inuu maamuuso xadgudubka "kalluunka-hilib-field" theme free, waxaa daba socday laba goobood oo walaasheed ay California. Kuugga Geno Bernardo qibradiisa u keentaa dhadhan aad si, halka design kuugga Malarkey ayaa keenaya jawiga.
Laga jaray Five (AKA- "The Ice Bar")
(Mandalay Bay, 3930 Las Vegas Blvd South #702-740-5800) Booqo website
(Vetetian, 3377 Las Vegas Blvd South #702-293-3388) Booqo website
Laga jaray Five wuxuu bixiyaa khibrad bar gaar ah. Fahan ahaan waxa weeyi birta coolest ee aan abid ahayd in! Heerkulka waxaa lagu hayaa qabow -5 Celsius iyo wax kasta oo waxaa lagu sameyn karaa oo baraf ah laga sameeyey oo kursiga soo afjareysa baraf, muraayadaha, iyo wasladdii ... y Waxaad ka heli sawirka. parkas A iyo gacmo gashi ayaa diyaar u ah martida walba marka aad soo gashid. Waxay hadda leeyihiin goobood oo ku yaalla meelo 4: Vegas (The newest ee Mandalay Bay - cinwaanka ku qoran - oo kale Monte Carlo The), New York, Orlando, iyo jasiiradaha Cayman ah. farshaxan Ice ee ugu badato kala duwan kasta! dhacdooyinka gaarka ah ayaa lagu qaban karaa iyadoo ay xulashada u leedahay in mid ka mid ah fanaaniinta baraf ay aad qoraysaan yar wax gaar ah - farshaxan ah, dhisme, logo shirkad - wax kasta. Waa meel aad u qabow si ay u siiyaan bandhig ...
Kaliya u dhaaf Vegas si aad u bixiso gunno saddex meelood oo kale oo aan laga saari karin liiskan! Waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo la sheegi karo inay u qalmaan in lagu daro, laakiin kuwani waa kuwa ugu fiican (fikradayda!) Halkan waxaa ah gunnadaada:
Tacos El Gordo (1724 E. Charleston Blvd. #702-251-8226) Booqo website
cunnada Mexico la maroojin Tijuana ah, waxa ay leedahay laba California iyo saddex goobood Las Vegas (I mid ka mid ah on strip ku doortay, sida in mid ka mid ah waan ogahay!) waxaan lahaa Taco Azteca iyo Fries halkan. Fries The muuqan aad doorato mid ka mid ah hilibka dhadhan fiican ugu sareysa sariir of shiilan ay. Wax kasta oo ay ahayd cusub iyo inay Cadha daraadeed la dhadhan. Taco wuxuu lahaa tiin ugu fiicnaa ee aan abid la cunaa. Waxay kasoo muuqan kala duwan oo Tacos oo ay la socdaan shan suxuunta qaaska ah.
Rick ee Rollin 'BBQ Smoke & Tavern (725 Las Vegas Blvd S STE 110 #702-462-9880) Booqo website
Rick ee Rollin 'BBQ Smoke & Tavern waa tusaale kaamil ah oo ah waxa si wadajir ah BBQ iyo tavern waa in. Plus, waxaa sidoo kale fursad ah in aad garaac doonaa galay qaar ka mid ah xiddigaha Stars dhilif History Channel ee! The Shop dhilif Gold & Silver saftay taxanaha ah waa uun a kaadida-bit koonfureed ee tavern this. Tilmaamo bar The 16 tacaamulo maxaliga ah biirka on tuubada, iyo sidoo kale isku dhafka ah dhadhan of cocktails koonfurta. Isku day feeraha ah! Waxay tahay si fudud u cajiib ah! Suugo BBQ waa sida ugu fiican ee ama ka fiican tahay sida ugu fiican ee suugada oo macmal ah! Kaliya waxaan jeclaan lahaa in ay u dhalooyin iyo ka iibiyey, sidoo kale. Rick ee Rollin 'BBQ Smoke waa si wadajir ah ugu wanaagsan ee BBQ ee aan abid ahayd in - la yaab leh!
Beauty & Essex (3708 S Las Vegas Blvd, #702-737-0707) Booqo website
Ha u ogolaan Dukaan Pawn hortiisa inuu kugu khiyaaneeyo! Tani runti waa mid casri ah oo qabow Speakeasy oo ku yaal hudheelka ugu caansan badhtamaha magaalada. Feejignow - kani maahan hadalkii awowgaa! Killer wuxuu cabaa… laakiin xitaa cunto ka sii wanaagsan! Shakhsi ahaan, waxaan kugula talinayaa 38 oz 30-Maalinta Qallalan ee Tomahawk Ribeye, waxay u adeegtay Suugaanta Saxeexa Beauty & Essex - midabka madow ama hargab doofaar ah & qamadi duban ... labaduba waa kuwo ugu sarreeya, labaduna waa kuwo aad u sarreeya! Sida ay u isticmaali jireen in maalinta - waa bees-jilbaha! Eeg liiska.
Hubso inaad ilaalinto meela badan oo ka mid ah meelahaas intii aad karto, si aad u hesho Las Vegas ugu fiican / NAB Show Khibrad aad kari karto! Waxaan rajeynayaa inaan ku aragno 2020 NAB Show!
Makhaayadaha lagu raaxeysto inta lagu jiro NAB Show - January 7, 2020
Maalmaha 12 ee Ciida Kirismaska ​​2019 - December 14, 2019
30,000 Feet - Waan ku socdaa #NABShow! @NABShow - April 1, 2019
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News 2020 NAB Show Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention Makhaayadaha Cool ee Las Vegas Cuntada Las Vegas Makhaayadaha Las Vegas NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 NAB16 nabshow Makhaayadaha ku yaal Las Vegas	2020-01-07
Previous: PlayBox Neo wuxuu ka warbixiyaa Buoyant 2019 oo leh rabitaan sii jira oo loogu talagalay Channel-in-a-Box Markabaynta iyo Booska
Next: Soo saarida Tiknoolaji Engineering